Balaayo daaman la qabtay leedahaye dabo la qabto ma leh: Faalo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Balaayo daaman la qabtay leedahaye dabo la qabto ma leh: Faalo
Balaayo daaman la qabtay leedahaye dabo la qabto ma leh.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr Cabdiraxman Ducaale Beyle ayaa Warbaahinta u sheegay in Bankiga aduunka iyo Hay’adda lacagta aduunka ay ku qanceen hufnaanta Nidaamka Maaliyadda ee Dalka, ayna u gudbeen wajiga labaad ee habka deen cafinta Soomaaliya.
Wasiir beyle ayaa soo bandhigay Lacag Cusub oo Shillin Soomaali ah taas oo isugujirta 5,000 iyo 10,000.
Haddii Qorsha sidaan yahay Lacagta la soo daabacayo ay u yartahay 1,000 (Kun Shillin) Wasiir beyla Soomaaliya waxa uu ku wadaa Waddo qaldan.
Soomaaliya Xiligan ma u baahantahay in Lacag loo soo Daabaco?
Waa Su’aal qof walbo ku taagan,siyaabo kala duwana looga Jawaabi karo,Soomaaliya Haa Lacag wey u baahantahay in loo soo Daabaco laakiin Nooca Lacagta ay dooneyso waa sidee?
Maadaama Dalka kabasho ku jiro,Burburna ka soo baxayo Baahida Jirta ee ah in la helo Lacag Shillin Soomaali ah waa mid taagan,waxaana loo baahanyahay lacag qiimo leh oo Shillimimaad leh si Nolosha Hoose qofka joogo u awoodo in uu wax ku iibsan karo Boqol Shillin iyo wixii ka yar.
Soomaalidu waxa ay ku Maahmaahdaa “Biyo inta aysan ku soo gaarin ayaa la iska moosaa” Fal Celin dhab ah waa in la Muujiyaa si looga hortago halista Culus ee Wasiirka Maaliyadda la damacsanyahay Shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxman Ducaale Beyle waxa uu ka mid yahay Shaqsiyaadka Aqoonta Maaliyeed lagu tabayo laakiin haddii uu sidaan ku qancay Qorshe kale ayaa u qarsoon.
1000 shilin hadaa la isticmaalaa marka idkale keen yay faaido ugu jirtaa waa cidna mar haddi lacagihi kabi lahaa sida 100 iyo 50 ayna jirin.